Umthetho wepropathi yengqondo | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
UMthetho wePropathi yeNgqondo (IP)
Ukwenzela ukuthintela abanye abantu ekusebenziseni umsebenzi wakho, umthetho wepropathi enengqondo unika ithuba lokukhusela izimvo zakho eziphuhlisiweyo kunye nengqondo yokuyila. Oku kuthetha ukuba indalo yakho inokusetyenziswa kuphela ngemvume yakho. Oku kubaluleke kakhulu kuluntu lwethu oluguquka ngokukhawuleza. Ngaba ungathanda ukwazi ngakumbi malunga nomthetho wepropathi yobukrelekrele?
Khusela INDALO YAKHO
Umthetho wobunini bepropathi
Ukwenzela ukuthintela abanye abantu ekusebenziseni umsebenzi wakho, umthetho wepropathi enengqondo unika ithuba lokukhusela izimvo zakho eziphuhlisiweyo kunye nengqondo yokuyila. Oku kuthetha ukuba indalo yakho inokusetyenziswa kuphela ngemvume yakho. Oku kubaluleke kakhulu kuluntu lwethu oluguquka ngokukhawuleza.
> I-intellectual property
> Amalungelo awahlukeneyo epropathi
Ngaba ungathanda ukwazi ngakumbi malunga nomthetho wepropathi yobukrelekrele? Iingcali kwi- Law & More inokukubonelela ngoncedo lwezomthetho ukuba unqwenela ukukhusela imibono okanye indalo yakho. Ukuba unxibelelana nathi, siya kukunceda kubhaliso lwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwaye siya kusebenza egameni lakho nabaphi na abophula umthetho. Ubuchule bethu kwicandelo lomthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuthengisa:
• Ilungelo lokushicilela;
Amalungelo obunikazi kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza;
ziingxaki zabathengi. ”
Ukuba ungumqambi, umyili, umphuhlisi okanye umbhali, ungawukhusela umsebenzi wakho ngomthetho wepropathi yobunini. Umthetho wepropathi enobunkunkqele uqinisekisa ukuba abanye banokungasebenzisi indalo yakho ngaphandle kokuba unike imvume yokwenjenjalo. Oku kukunika ithuba lokuphinda ubeke imali kutyalo-mali lwakho. Ukufumana ukhuseleko, kubalulekile ukuba ube nombono ogcweleyo. Umbono uwodwa awonelanga, kuba unokusebenza ngeendlela ezininzi. Xa unombono ophuhlisiweyo, amagqwetha ethu anokurekhoda ipropathi yakho yobuchule ngeendlela ezahlukeneyo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zomthetho wepropathi yobukrelekrele, onokusetyenziswa ngokwahlukeneyo okanye ngokudibeneyo.
Amalungelo obunini bepropathi
Ummeli welungelo lokushicilela
Ngaba ungumnini wencwadi, ifilimu, umculo, ipeyinti, ifoto okanye umfanekiso oqingqiweyo? Nxibelelana nathi
Ngaba unqwenela ukubhalisa imveliso okanye inkonzo? Singakunceda
Faka isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza
Ngaba ungumnini wophando? Cwangcisa ipatent
Sikunceda ukubhalisa igama lakho kurhwebo
Amalungelo awahlukeneyo epropathi
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemithetho yepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, uhlobo, ubungakanani kunye nobude bexesha obahluka ngalo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Ngamanye amaxesha amalungelo obunini bepropathi enobhaliso angabhaliswa ngaxeshanye. Law & MoreUbungcali kwicandelo lomthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kubandakanya ilungelo lokushicilela, umthetho wophawu lwentengiso, amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nelungelo elilodwa lomenzi kunye namagama orhwebo. Ngokuqhagamshelana Law & More ungabuza malunga nezinto ezinokwenzeka.
Ilungelo lokushicilela likhusela imisebenzi yomenzi kwaye linika umdali ilungelo lokupapasha, ukuvelisa nokukhusela umsebenzi wakhe ekusetyenzisweni gwenxa ngabantu besithathu. Igama elithi 'umsebenzi' libandakanya iincwadi, iifilimu, umculo, imizobo, iifoto kunye nemifanekiso eqingqiweyo. Nangona ilungelo lokushicilela kungafuneki ukuba lenziwe, njengoko lisenzeka ngokuzenzekelayo xa kusenziwa umsebenzi, kuyacetyiswa ukuba kubhalwe ilungelo lokushicilela. Ukumisela ilungelo, ungasoloko ungqina ukuba umsebenzi ubekhona ngomhla othile. Ngaba ungathanda ukubhalisa ilungelo lakho lokushicilela kwaye ukhusele umsebenzi wakho kubantu abophula ilungelo lakho lokushicilela? Nceda unxibelelane namagqwetha ku Law & More.
Umthetho wophawu lwentengiso wenza ukuba kubhaliswe uphawu lwakho lwentengiso, ukuze kungabikho mntu unokusebenzisa igama lakho ngaphandle kwemvume yakho. Ilungelo lokuthengisa uphawu luqinisekiswa kuphela ukuba ubhalisa uphawu lwentengiso kwirejista yophawu lwentengiso. Law & MoreAmagqwetha angakuvuyela ukukunceda kule nto. Ukuba uphawu lwentengiso lubhalisiwe kwaye lwasetyenziswa ngaphandle kwemvume yakho, olu luphawu lwentengiso. Eyakho Law & More igqwetha liya kuthi likwazi ukukunceda ukuba uthathe inyathelo ngokuchasene nabaphula umthetho.
Amalungelo obunikazi kunye namalungelo awodwa abenzi
Nje ukuba uphuhlise indlela yokuyila, imveliso yezobugcisa okanye inkqubo, unokufaka isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza. Ipatent iqinisekisa ukuba unelungelo elikhethekileyo ekuyileni kwakho, kwimveliso okanye kwinkqubo. Ukwenza isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza, kufuneka uhlangane neemfuno ezine:
• Kumele ukuba ibe sisiseko;
• Uyilo kufuneka lube lutsha;
Kufuneka kubekho inyathelo lokungenisa. Oku kuthetha ukuba uyilo lwakho kufuneka lube nobuchule kwaye hayi nje uphuculo oluncinci kwimveliso esele ikho;
Ukuyilwa kwakho kufuneka kusebenze ngokusebenzayo.
Law & More Ijonga ukuba uyahlangabezana nazo zonke iimfuno kwaye unceda ukuba ufake isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza.
Igama lokurhweba ligama eliqhutywa ngalo inkampani. Igama lezorhwebo linokufana negama legama, kodwa akusoloko kunjalo. Amagama orhwebo anokukhuseleka ngokuwabhalisa kwiChamber of Commerce. AbaThengi abavumelekanga ukuba basebenzise igama lakho. Amagama orhwebo ahambelana edidayo negama lakho lokurhweba nawo awavumelekanga. Nangona kunjalo, olu khuselo luboshwe ngokomda. Iinkampani ezikwenye ingingqi zisebenzisa igama elifanayo okanye elifanayo. Nangona kunjalo, igama lokurhweba linokunikwa ukhuseleko olongezelelweyo ngokuthi ulubhalise kwakhona njengophawu lwentengiso. Amagqwetha at Law & More uya kukuvuyela ukukucebisa ngamathuba.
Ngaba ujonge igqwetha lepropathi enengqondo? Nceda unxibelelane Law & More. Singakunceda ukuseka amalungelo akho kwaye ndikuxhase xa amalungelo akho esophulwa.